Ukuphindaphindeka okuPhakamileyo kumatshini wokuCoca uMatshini oShushu
Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / Ukuchithwa kweNgcingo ye-Wire
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: Thenga i-heater tempering heater, induction ubushushu obushushu, ukutyunjwa, i-heater tempering heater, Inkqubo yokungenisa ubushushu, ukutyhutyulwa komhlaba, intsimbi ucingo tempering, ukufudumala komphezulu, Isifudumezi esingaphezulu komhlaba, ukucutha, izixhobo zokungenisa ngaphakathi, inkqubo tempering, Ukucinywa kwentambo
Induction Intsimbi yokuTshisa iProcee Isicelo
Induction tempering yinkqubo yokufudumeza eyandisa iipropathi zoomatshini ezinje ngokuqina kunye nokuqina kwezinto zokusebenza esele zilukhuni.
Siqinisekisa umgangatho ophezulu, ukujika ngokukhawuleza, inkonzo ebalaseleyo kubathengi, kunye namaxabiso okhuphiswano.
I-HLQ Uyinkokeli kushishino lokunyanga ubushushu ekuboneleleni ngokubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo zokunyanga ubushushu, kubandakanya ukubila, e-China. Induction tempering yinkqubo yokunyanga ubushushu yesiqhelo eyenziwayo emva kokuba inkqubo yoqheliso lokomisa igqibile. Yenziwa kubushushu obuphantsi kunenkqubo yokuqinisa yokungenisa ukuze kufikelelwe kuluhlu lobunzima obufunekayo okanye ukongeza ubukrakra kwinxalenye ngokwandisa i-ductility. Ukwenziwa kobushushu bentsimbi ngokwesiqhelo kwenziwa ngamaza asezantsi ukuvelisa iziphumo kwimizuzwana efana nokusetyenziswa kobushushu besithando esithatha iiyure.
Ukufudumeza i-induction kuyasebenza kwinkqubo eqhubekekayo yokubilisa apho isitokhwe socingo sondliwa ngekhoyili yoqheliso kwisantya semveliso.
Material: Ucingo lwentsimbi u-3mm ukuya ku-12mm ubukhulu
Ukushisa: 1922 ºF (1050 ºC)
Ukuphindaphinda: 90 kHz
Induction Izixhobo zokufudumeza: I-DW-UHF-60 kW, i-100 kHz inkqubo yokufudumala, Ixhotywe ngesihloko esisebenza kude esiqukethe ii-1.0 μF ezisibhozo ze-2 μF iyonke
-Iindlela ezintathu zokufudumeza ezenziweyo ziyilelwe kwaye zaphuhliswa ngokukodwa kwesi sicelo sokugubungela uluhlu lwentambo
Isitokhwe socingo sondliwa ngekhoyili ye-helical engamashumi amane yokujika kwinqanaba leemitha ezi-6 / ngomzuzu, ukufikelela kubushushu obufunekayo ukuze kusebenze inkqubo yokubila. I-coil ye-helical efana ne-20 isetyenziselwa ubukhulu be-wire ubukhulu
Ukugcinwa okufunekayo kwemigca emi-6 yesitokhwe esitratweni somlilo ophefumlayo ngokudluliselwa kobushushu okudanisayo kwiingcingo zobubanzi obuncinci. Ukuchithwa kufuna i-50% yamandla angaphantsi kunye nokunciphisa umgca wokuvelisa umgca nge-90%
- bushushu ngqo kwicingo, ukonga amandla kunye nexesha
-Udityaniso olulula kumgca wemveliso, ukuphucula ukugqitywa
- ulawulo oluchanekileyo lobushushu
-Kwanokuhanjiswa kobushushu ngaphakathi kwecingo
Induction tempering iqeshwe ngokubanzi kwishishini leemoto ukukhawulezisa izinto ezomeleleyo zomhlaba ezinje ngeeshafts, imivalo kunye namalungu. Le nkqubo ikwasetyenziswa kwishishini lombhobho kunye nemibhobho yokuqumbisa izinto ezomeleleyo. Ukuchithwa kwe-induction ngamanye amaxesha kwenziwa kwisikhululo sokuqina, ngamanye amaxesha kwisikhululo esinye okanye ezahlukeneyo zomsindo.
Kutheni usebenzisa i-induction tempering?
Inkqubo yethu yokumisa i-induction ivelisa iziphumo ngokukhawuleza. Ukutshiswa kwee-steels ezilukhuni kungumsebenzi wexesha kunye nobushushu. Induction tempering isebenzisa ixesha elifutshane lokufudumeza (ihlala kuphela imizuzwana) kunye nobushushu obuphezulu ukuvelisa iziphumo ezilingana nonyango lwesithando somlilo esidla ngokufuna iiyure. Induction tempering inokwenziwa kuwo onke amacandelo anzima. Isiphumo licandelo elinobunzima obonyukayo, amandla amdaka kunye namandla eempembelelo.
Olona loncedo luphambili lwe ukutyunjwa isantya. Ukuchithwa kunokubangela ukuba umsebenzi usebenza ngemizuzu, ngamanye amaxesha kunye nemizuzwana. Ukufudumeza isithando somlilo kudla ngokuthatha iiyure. Kwaye, njengoko ukufakwa kwe-induction kumgangatho ofanelekileyo wokudityaniswa komgca, kunciphisa inani lezinto kwinkqubo. Induction tempering iququzelela ukulawulwa komgangatho wobugcisa bomntu ngamnye. Izitishi ezihlanganisiweyo zomoya osindisayo nazo zigcina indawo enexabiso.